यौन स्वास्थ्य Archives – healthykhabar.com
सुरक्षित गर्भपतन सेवाका १८ वर्षः ५८ प्रतिशत महिला अझै असुरक्षित गर्भपतन गर्छन्
काठमाडौँ, असोज १० गते । नेपालमा सुरक्षित गर्भ पतन सेवाले मान्यता पाएको १८ वर्ष पुरा भयो । गर्भपतन सेवाले मान्यता पाएपनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या अत्यधिक रहेको छ । यस्तै आवश्यक पर्ने महिलाको पहुुँचमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा अझै पुुग्न सकेको छैन । १८ वर्षअघि असोज १० को मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत गर्भ पतन गराउनुपर्ने आवश्यकता भएका महिलाले यस्तो सेवा लिन पाउने कानुनी मान्यता प्राप्त भएको थियो । त्यसभन्दा अघि गर्भ पतन गराएमा कारागार सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार गर्भपतन सेवा सुरु भएको १८ वर्षसम्म पनि ५८ प्रतिशतले असुरक्षित सेवा लिइरहेको जानकारी प्रस्तुुत गर्नुुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिङ्करीले महिलाले नचाहेको १२ हप्ता सम्मका र भ्रूूणमा खराबी वा बाँच्न नसक्नेलगायत वंशानुगत रोग आउने सम्भावना भएमा, बलात्कार तथा हाडनाता करणी भएमा १८ हप्ता सम्मका गर्भ पतन गराउन पाउने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ मा व्यवस्था भएको…
यौनकर्मीले रेनकोट किन प्रयोग गर्छन् ?
काठमाडौं, ५ साउन । कोरोना भाइरसका कारण विश्वका सबैजसो पेशा व्यवसाय समस्यामा परेका छन् । यीमध्ये यौन पेशाचाहिँ सबैभन्दा धेरै संकटमा परेको पेशा हो । कोरोना भाइरस महामारी लम्बिँदै जाँदा ल्याटिन अमेरिकी देश बोलिभियाका यौनकर्मीहरु सुरक्षाका विशेष उपाय अपनाउँदै काममा फर्किँदै छन् । यौनकर्मी महिलाहरुले सुरक्षाकवचका रुपमा हातमा पञ्जा, ब्लिच पाउडर तथा पारदर्शी रेनकोट लगाएर यौन व्यवसायमा पुनरागमन गर्न लागेका हुन् ।यौनकर्मीहरुको लागि काम गर्ने संस्था अर्गनाइजेसन अफ नाइट वर्कर्स अफ बोलिभियाको सल्लाहअनुसार यौनकर्मी महिलाहरु सुरक्षा उपाय अपनाउँदै काममा फर्किन लागेका हुन् । यसबाट आफूहरुलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुने उनीहरुको विश्वास छ । बोलिभियामा देह व्यापार वैधानिक छ । तर केवल इजाजत प्राप्त यौनशालाहरुमा मात्र विभिन्न कडा नियम पालना गरी यौन व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइन्छ । बोलिभियामा कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत मार्चदेखि सुरु भएको लकडाउन अहिले केही खुकुलो पारिएको छ । तर यौनकर्मीहरुका लागि भने दिनको समयमा विभिन्नखाले बन्देज र रातको समयमा कफ्र्यू नै लगाइएको छ । एक…
अष्ट्रेलिया: एचआइभी संक्रमण दर घट्ने क्रममा
सिड्नी,असार । अष्ट्रेलियामा एचआइभी संक्रमित पीडित दरमा गएको १८ वर्ष यताकै सबैभन्दा कमी आएको एक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो अवस्था देखिएको सिड्नीबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । अष्ट्रेलियाको दि युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्सको अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य भेटिएको हो । उक्त विश्वविद्यालयआवद्ध कर्बि नामक एक संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा यहाँको एचआाइभी संक्रमण दरमा गएको १८ वर्ष यताकै सबैभन्दा कमी आएको देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । उक्त संस्थाको अनुसन्धानले सन् २०१८ मा एचआइभी संक्रमितहरुको गणना गरिएकोमा ८३५ जना मात्र भेटिएको देखाएको छ । देशभरमा गरिएको सो एचआइभी संक्रमितहरुको खोजीका क्रममा ८३५ जना मात्र भेटिएको उक्त संस्थाका प्रमुख प्राध्यापक रेबेका गायले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो संख्या गएको १८ वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो । उनले भने– अष्ट्रेलियामा हरेक वर्ष एचआइभी संक्रमितहरुको पहिचान गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरिएकोमा गतवर्ष अर्थात् सन् २०१८ को यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा थोरै हो । उनले भने– हुनत हामीले पछिल्ला वर्षहरुमा अष्ट्रेलियामा…
नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कानूनमा मात्रै
काठमाडौ,१७असार ।कानुनमा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकारको ब्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको पाइएको छ। महिलामा परिवार नियोजनको पहुँच पुग्न नसकिरहेको भन्दै शिक्षित महिला पनि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी आफ्नो अधिकारबाट बन्चित रहेका छन् । त्यस्तै प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयलाई सञ्चारमाध्यामले प्राथमिकता नदिएको बताइएको छ । जनसंख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी)को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार मिडिया एक्सन नेपालले गरेको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा कानून उत्कृष्ठ भएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको बताइएको छ। । कार्यशाला गोष्ठी’मा वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले प्रजनन स्वास्थ्य र यौनिकताका विषयलाई सञ्चारमाध्यामले प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । उनले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय मिडियाको व्यवस्थापन पक्षको रहने भन्दै नेपाली मिडियामा स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयले स्थान पाउन मुस्किल रहेको बताए । कार्यक्रममा अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा बोल्न र लेख्न शिक्षित महिलाहरु पनि हिच्किचाउने गरेको बताइन् । उनले १० लाख बढी महिला इच्छा भएर पनि परिवार नियोजनको पहुँचबाट बाहिर रहेको बताइन…
म हाल १९ वर्षकी भएँ । मेरो विवाह भएको तीन वर्ष पूरा भयो । मेरो पहिलो गर्भ खेर गएको थियो । तत्पश्चात् जति प्रयास गर्दा पनि गर्भ बसेन र अहिले विगत दुई–तीन हप्तादेखि त झन् अर्को समस्या देखा पर्दै आएको छ । जस्तै— योनि चिलाउने, योनिभित्र सुन्निने, गन्हाउने सेतो पानी बग्ने, योनिबाहिर खटिरा देखा पर्ने, यौनसम्पर्क गर्दा लिङ्ग नर्छिर्ने अनि योनि दुख्ने आदि समस्याले गर्दा म र मेरा श्रीमान् एकदमै चिन्तित छौं । ५६१६१ गर्भ रहन किन गाह्रो भएको होला ? तपाईं अहिले १९ वर्षको हुनुभएको छ र तपाईंको विवाह १६ वर्षमै भएको देखिन्छ । तपाईं किशोरावस्थामा भएकाले प्रजनन क्षमता भए पनि त्यो परिपक्व भैनसकेको हुनसक्छ । आमा र शिशुको स्वास्थ्यका दृष्टिले २० वर्षपछि मात्र सन्तान जन्माउनु उपयुक्त मानिन्छ । तपाईं शारीरिक रूपमा परिपक्व नभैसक्नुभएकाले पनि तपाईंको गर्भ रहन नसकेको हुन सक्छ । त्यसबाहेक गर्भ नरहनुका अन्य के–कस्ता कारण हुन सक्छन् छोटकरीमा चर्चा गरौं । डिम्ब नियमित रूपमा निस्किरहेको…